ဖိနပ်တိုက်စားရတဲ့ ဘ၀မှ သမ္မတဖြစ်ခဲ့သူ – Tameelay
၁၉၄၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ဆင်းရဲသား လယ်သမား မိသားစုဟာ ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်…
ဆင်းရဲလွန်းတာကြောင့် ကောင်လေးဟာ ၄ နှစ်သား အရွယ်ကတည်းက လမ်းပေါ်မှာ မြေပဲဆံလိုက်ရောင်းခဲ့ရတယ်… ဒါတောင် အစားနပ်မှန်မှန် သူမစားခဲ့ရသလို အ၀တ်အထည် လုံလုံလောက်လောက်လည်း မ၀တ်ဆင်ခဲ့ရပါဘူး… ကျောင်းစတက်စအရွယ်မှာ ကောင်လေးဟာ ကျောင်းအားလပ်ချိန်တိုင်းအဖော်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ဖိနပ်လိုက်တိုက်ခဲ့ပါတယ်…အကယ်၍ ဖိနပ်တိုက်တဲ့သူ မရှိရင် သူတို့အငတ်ခံနေကြရပါတယ်…
ကောင်လေး ၁၂ နှစ်အရွယ်ရောက်စဉ်တစ်ညမှာ ပင်းမင်းဆိုင်က သူဌေးတစ်ဦး ဖိနပ်လာတိုက် ပါတယ်… ကောင်လေး နဲ့ အဖော်တွေဟာ သူ့ထက်ငါ ဖိနပ်တိုက်ရဖို့ သူဌေးဆီ ၀ိုင်းအုံသွားခဲ့ကြတယ်… ကောင်လေး ၃ယောက်ရဲ့ တောင့်တနေတဲ့ မျက်ဝန်းအစုံကိုကြည့်ပြီး သူဌေးဆုံးဖြတ်ရခက်နေပါတယ်…
နောက်ဆုံးတော့သူဌေးကအကြွေစေ့ ၂ စေ့ကိုထုတ်ပြီး“ဖိနပ်တိုက်ခ ၂ ကျပ်ပေးမယ်…ဘယ်သူဖိနပ်တိုက်ပေးမလဲ” ဆိုပြီးမေးပါတယ်…ဖိနပ် တစ်ခါတိုက်မှ ပြား ၂၀ ပဲရတာ အခု ၁၀ ဆလောက် ပိုရမယ်ဆိုတော့ ကောင်လေး ၃ ယောက်ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေဟာ အရောင်တွေလင်းလက် သွားတော့တာပေါ့… တစ်ယောက်က
“ကျနော်တိုက်ပါရစေ.. မနက်ကတည်းက အစာမစားရသေးပါဘူး…
စားဖို့ ပိုက်ဆံမှ မရရင် ကျနော် ဆာပြီးသေသွားနိုင်တယ်…” ဆိုပြီး ပြောလေရဲ့… နောက်တစ်ယောက်ကလည်း
အမေကလည်း နေမကောင်းဘူး…အိမ်အတွက်ကျနော်စားစရာဝယ်ပြန်ပေးရမှာ…ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ညအိမ်ပြန်ရောက်ရင် ကျနော်အရိုက်ခံရတော့မယ်” ဆိုပြီးပြောရှာပါတယ်…
ဒီအချိန်မှာ နောက်ဆုံး ကျန်နေတဲ့ ကောင်လေးက သူဌေးလက်ထဲက ပိုက်ဆံကိုကြည့်ပြီး ခဏစဉ်းစားတယ်.ပြီးတော့
“တကယ်လို့ ဒီပိုက်ဆံ ၂ ကျပ် ကျနော်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့နှစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် တစ်ကျပ် ပေးလိုက်ပါ့မယ်” လို့ပြောတော့ သူဌေး နဲ့ ကျန်အဖော် နှစ်ယောက် အံ့အားသင့်သွားကြပါတယ်..
သူတို့တကယ်ဆာနေကြတာပါ..ကျနော်ကတော့ နေ့လည်တုန်းက မြေပဲဆံလေး နည်းနည်းစားထားရတော့ ဖိနပ်တိုက်ဖို့ အားရှိနေပါသေးတယ်…သူဌေးဖိနပ်ကိုကျနော်တိုက်ပါရစေ…
ကောင်လေးရဲ့စကားကြောင့်သူဌေးခံစားသွားရတယ်… ကောင်လေးကို ဖိနပ်တိုက်စေခဲ့ပြီး ငွေ ၂ ကျပ်ကိုပေးလိုက်တယ်… ကောင်လေးက ဘာမှမပြောဘဲ သူ့အဖော် နှစ်ယောက်ကို ချက်ချင်းခွဲပေးလိုက်တယ်…
ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့သူဌေးက ကောင်လေးကိုရှာပြီး ကျောင်းအားလပ်ချိန်တိုင်းမှာသူ့ပင်းမင်းဆိုင်မှာအလုပ်ဝင်စေပါတယ်…ညစာထမင်းပါကျွေးခဲ့တယ်…လုပ်အားခနည်းပေမယ့် ဖိနပ်လိုက်တိုက်တာထက်စာရင် ပိုအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်… ဒါဟာ ကိုယ့်ထက်နွမ်းပါးတဲ့သူကို ကူညီလို့ ရလာတဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာကောင်လေးသိတယ်…
ဒါကြောင့် နောင်တွေမှာလည်း အခက်အခဲရှိသူတိုင်းကို သူတတ်စွမ်းသလောက် ကူညီခဲ့ပါတယ်…
နောက်တော့ ကောင်လေး ဟာ ကျောင်းရပ်နားပြီးအလုပ်ရုံမှာအလုပ်သမားဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်…
အလုပ်သမားတွေအတွက် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးရဖို့ သူတောင်းဆိုခဲ့တယ်… အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်မှာ အလုပ်သမား အသင်းထဲ သူဝင်ခဲ့တယ်…အသက် ၄၅ နှစ်မှာ အလုပ်သမားပါတီကို သူတည်ထောင်ခဲ့တယ်… ၂၀၀၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ
“ဒီနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့လူတွေအားလုံး တစ်နေ့ကိုထမင်းသုံးနပ် မှန်မှန်စားစေရမယ်…” ဆိုပြီးသူရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်…
ပြည်သူအများရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရရှိခဲ့ပြီး အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ ၃၅ ဦးမြောက် သမ္မတဖြစ်လာခဲ့တယ်…
အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး အလုပ်သမားကနေ သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်…
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ဒုတိယအကြိမ် သမ္မတအဖြစ်ပြန်လည်အရွေးခံခဲ့ရပြီး သူသမ္မတသက်တမ်း ၈ နှစ်အတွင်းမှာ သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တယ်… တစ်နိုင်ငံလုံမှာရှိတဲ့ ၉၃% ကလေးငယ်တွေနဲ့ ၈၃% အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေကို တစ်နေ့သုံးနပ်မှန်စေခဲ့တဲ့အပြင် သူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ “မြက်ကိုစားခဲ့တဲ့ ဒိုင်နိုဆော ဘ၀ကနေ အမေရိကတိုက်ရဲ့ ခြင်္သေ့” အဖြစ် တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ၁၀ နိုင်ငံမြောက် စီးပွားရေးနိုင်ငံကြီးဖြစ်စေခဲ့တယ်…
သူကတော့ တခြားလူမဟုတ်ပါဘူး… ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ သမ္မတအဖြစ် ရပ်နားခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတဟောင်း Luiz Inacio Lula da Silva ပဲဖြစ်ပါတယ်…
ရောက်အောင် သွားဖို့ကြိုးစားရမှာကသာ မိမိတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်…။
၁၉၄၅ ခုနှဈ အောကျတိုဘာ ၂၇ ရကျနမှေ့ာ ဆငျးရဲသား လယျသမား မိသားစုဟာ ကောငျလေး တဈယောကျကို မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ…
ဆငျးရဲလှနျးတာကွောငျ့ ကောငျလေးဟာ ၄ နှဈသား အရှယျကတညျးက လမျးပျေါမှာ မွပေဲဆံလိုကျရောငျးခဲ့ရတယျ… ဒါတောငျ အစားနပျမှနျမှနျ သူမစားခဲ့ရသလို အဝတျအထညျ လုံလုံလောကျလောကျလညျး မဝတျဆငျခဲ့ရပါဘူး… ကြောငျးစတကျစအရှယျမှာ ကောငျလေးဟာ ကြောငျးအားလပျခြိနျတိုငျးအဖျောသူငယျခငျြးနှဈယောကျနဲ့ဖိနပျလိုကျတိုကျခဲ့ပါတယျ…အကယျ၍ ဖိနပျတိုကျတဲ့သူ မရှိရငျ သူတို့အငတျခံနကွေရပါတယျ…
ကောငျလေး ၁၂ နှဈအရှယျရောကျစဉျတဈညမှာ ပငျးမငျးဆိုငျက သူဌေးတဈဦး ဖိနပျလာတိုကျ ပါတယျ… ကောငျလေး နဲ့ အဖျောတှဟော သူ့ထကျငါ ဖိနပျတိုကျရဖို့ သူဌေးဆီ ၀ိုငျးအုံသှားခဲ့ကွတယျ… ကောငျလေး ၃ယောကျရဲ့ တောငျ့တနတေဲ့ မကျြဝနျးအစုံကိုကွညျ့ပွီး သူဌေးဆုံးဖွတျရခကျနပေါတယျ…
နောကျဆုံးတော့သူဌေးကအကွှစေေ့ ၂ စကေို့ထုတျပွီး“ဖိနပျတိုကျခ ၂ ကပျြပေးမယျ…ဘယျသူဖိနပျတိုကျပေးမလဲ” ဆိုပွီးမေးပါတယျ…ဖိနပျ တဈခါတိုကျမှ ပွား ၂၀ ပဲရတာ အခု ၁၀ ဆလောကျ ပိုရမယျဆိုတော့ ကောငျလေး ၃ ယောကျရဲ့ မကျြဝနျးတှဟော အရောငျတှလေငျးလကျ သှားတော့တာပေါ့… တဈယောကျက
“ကနြျောတိုကျပါရစေ.. မနကျကတညျးက အစာမစားရသေးပါဘူး…
စားဖို့ ပိုကျဆံမှ မရရငျ ကနြျော ဆာပွီးသသှေားနိုငျတယျ…” ဆိုပွီး ပွောလရေဲ့… နောကျတဈယောကျကလညျး
အမကေလညျး နမေကောငျးဘူး…အိမျအတှကျကနြျောစားစရာဝယျပွနျပေးရမှာ…ဒီလိုမှ မဟုတျရငျ ညအိမျပွနျရောကျရငျ ကနြျောအရိုကျခံရတော့မယျ” ဆိုပွီးပွောရှာပါတယျ…
ဒီအခြိနျမှာ နောကျဆုံး ကနျြနတေဲ့ ကောငျလေးက သူဌေးလကျထဲက ပိုကျဆံကိုကွညျ့ပွီး ခဏစဉျးစားတယျ.ပွီးတော့
“တကယျလို့ ဒီပိုကျဆံ ၂ ကပျြ ကနြျောရခဲ့မယျဆိုရငျ သူတို့နှဈယောကျကို တဈယောကျ တဈကပျြ ပေးလိုကျပါ့မယျ” လို့ပွောတော့ သူဌေး နဲ့ ကနျြအဖျော နှဈယောကျ အံ့အားသငျ့သှားကွပါတယျ..
သူတို့တကယျဆာနကွေတာပါ..ကနြျောကတော့ နလေ့ညျတုနျးက မွပေဲဆံလေး နညျးနညျးစားထားရတော့ ဖိနပျတိုကျဖို့ အားရှိနပေါသေးတယျ…သူဌေးဖိနပျကိုကနြျောတိုကျပါရစေ…
ကောငျလေးရဲ့စကားကွောငျ့သူဌေးခံစားသှားရတယျ… ကောငျလေးကို ဖိနပျတိုကျစခေဲ့ပွီး ငှေ ၂ ကပျြကိုပေးလိုကျတယျ… ကောငျလေးက ဘာမှမပွောဘဲ သူ့အဖျော နှဈယောကျကို ခကျြခငျြးခှဲပေးလိုကျတယျ…
ရကျအနညျးငယျအကွာမှာတော့သူဌေးက ကောငျလေးကိုရှာပွီး ကြောငျးအားလပျခြိနျတိုငျးမှာသူ့ပငျးမငျးဆိုငျမှာအလုပျဝငျစပေါတယျ…ညစာထမငျးပါကြှေးခဲ့တယျ…လုပျအားခနညျးပမေယျ့ ဖိနပျလိုကျတိုကျတာထကျစာရငျ ပိုအဆငျပွခေဲ့ပါတယျ… ဒါဟာ ကိုယျ့ထကျနှမျးပါးတဲ့သူကို ကူညီလို့ ရလာတဲ့ အခှငျ့အရေးဆိုတာကောငျလေးသိတယျ…
ဒါကွောငျ့ နောငျတှမှောလညျး အခကျအခဲရှိသူတိုငျးကို သူတတျစှမျးသလောကျ ကူညီခဲ့ပါတယျ…
နောကျတော့ ကောငျလေး ဟာ ကြောငျးရပျနားပွီးအလုပျရုံမှာအလုပျသမားဝငျလုပျခဲ့ပါတယျ…
အလုပျသမားတှအေတှကျ အလုပျသမားအခှငျ့အရေးရဖို့ သူတောငျးဆိုခဲ့တယျ… အသကျ ၂၁ နှဈအရှယျမှာ အလုပျသမား အသငျးထဲ သူဝငျခဲ့တယျ…အသကျ ၄၅ နှဈမှာ အလုပျသမားပါတီကို သူတညျထောငျခဲ့တယျ… ၂၀၀၂ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလမှာ
“ဒီနိုငျငံမှာ ရှိတဲ့လူတှအေားလုံး တဈနကေို့ထမငျးသုံးနပျ မှနျမှနျစားစရေမယျ…” ဆိုပွီးသူရှေးကောကျပှဲဝငျခဲ့တယျ…
ပွညျသူအမြားရဲ့ ထောကျခံမှုကို ရရှိခဲ့ပွီး အဲ့ဒီနိုငျငံရဲ့ ၃၅ ဦးမွောကျ သမ်မတဖွဈလာခဲ့တယျ…
အဲ့ဒီနိုငျငံရဲ့သမိုငျးမှာ ပထမဆုံး အလုပျသမားကနေ သမ်မတဖွဈလာခဲ့သူအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ…
၂၀၀၆ ခုနှဈမှာ ဒုတိယအကွိမျ သမ်မတအဖွဈပွနျလညျအရှေးခံခဲ့ရပွီး သူသမ်မတသကျတမျး ၈ နှဈအတှငျးမှာ သူပွောခဲ့တဲ့အတိုငျး လကျတှအေ့ကောငျအထညျဖျောခဲ့တယျ… တဈနိုငျငံလုံမှာရှိတဲ့ ၉၃% ကလေးငယျတှနေဲ့ ၈၃% အရှယျရောကျပွီးသူတှကေို တဈနသေုံ့းနပျမှနျစခေဲ့တဲ့အပွငျ သူ့ရဲ့ဦးဆောငျမှုအောကျမှာ “မွကျကိုစားခဲ့တဲ့ ဒိုငျနိုဆော ဘဝကနေ အမရေိကတိုကျရဲ့ ခွင်ျသေ့” အဖွဈ တဈကမ်ဘာလုံးရဲ့ ၁၀ နိုငျငံမွောကျ စီးပှားရေးနိုငျငံကွီးဖွဈစခေဲ့တယျ…
သူကတော့ တခွားလူမဟုတျပါဘူး… ၂၀၁၀ ခုနှဈကုနျပိုငျးမှာ သမ်မတအဖွဈ ရပျနားခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးနိုငျငံရဲ့ သမ်မတဟောငျး Luiz Inacio Lula da Silva ပဲဖွဈပါတယျ…
ရောကျအောငျ သှားဖို့ကွိုးစားရမှာကသာ မိမိတာဝနျဖွဈပါတယျ…။
Credit_ Original uploade
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိထားသင့်သော ဘုရားရှင် ဆံတော် ဘာကြောင့်အရှည်ထားရတာလဲ ? ? ?
ဘုရားရှင် ဆံတော် ဘာကြောင့်အရှည်ထားရတာလဲ *************************************** ဒီမေးခွန်းကို စတင်မေးခဲ့သူက ဘာသာခြားတစ်ယောက်။ ကြက်သေသေပြီး ဆွံအခဲ့သူက ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ။ သူကမေးတယ်… “”ဘုရားရှင်က ချစ်သားရဟန်းတွေကျတော့ ဦးပြည်းခေါင်းတုံးနဲ့ ။သူကိုယ်တိုင်ကျတော့ ဆံတော်အရှည်နဲ့ကျတော့ သိပ်နည်းလမ်းမကျဘူးမဟုတ်လား။ စော်ကားချင်လို့ မေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုပြီးတောင်းပန်တာပါ။ သိချင်လို့ ပါ။ တကယ်လို့တပည့်ရဟန်းတွေကို ဦးပြည်းခောင်းတုံးနဲ့ဆိုရင် …